महिलालाई स्तन समाउँदा किन आनन्द आउछ ? – email khabar | Latest news of Nepal
महिलालाई स्तन समाउँदा किन आनन्द आउछ ?
प्रकाशित : २०७१ असोज ३० गते १२:५७
असोज ३०, एजेन्सी-स्तनको स्पर्शले महिलाहरुमा यौन आनन्द प्राप्त हुन्छ । अर्थात् महिलाहरुको यौन उत्तेजनामा योनी जति संवेदनशील हुन्छ स्तनको टुप्पो पनि त्यस भन्दा कम हुँदैन । हुनत यो यथार्थ जान्ने र भोग्नेहरुले थाहा पाएकै कुरा हो । तर किन यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा भने हालै मात्र वैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाएका छन् ।
त्यसक्रममा प्राप्त तस्वीरहरुले योनी र स्तन दुबैबाट प्रवाह हुने उत्तेजना स्नायु हुँदै मस्तिष्कको क्लस्टर अफ ग्रेप्स भन्ने ठाउँमा गएको पाइयो । पुरुषमा पनि लिंगबाट प्रवाहित हुने उत्तेजना सोही भागले ग्रहण गर्ने गर्छ ।यसरि समाउद बढी भन्दा बढी आनन्द आउछ । आनन्द आउछ ।
मनोरंजन समाज समाज
प्रम कोइरालाले पदत्याग गर्दै
प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र सङ्घबीच सम्झौता